पञ्चायतिमा कुटिएका यादवको निधन : हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरेन प्रहरीले
विराटनगर / पञ्चायतिमा बोलाएर कुटपिट गरिएका विराटनगर–१४ जतुवाका समानन्द यादवको निधनपछि पनि प्रहरीले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ नगरेको भन्दै आफन्तले गुनासो गरेका छन् । छोराको विवाहको विषयलाई लिएर विराटनगर–१४ का वडाअध्यक्ष बालदेव यादवको घरमा गत जेठ ३२ गते भएको पञ्चायतिमा यादवमाथि निर्घात कुटपिट गरिएको थियो ।
कुटपिटबाट ‘सर्भाइकल स्पाइन’ का सि–३ देखि सि–६ सम्मका हड्डीहरु भाँचिएका घाइते यादवको बिहीबार साँझ कोशी अस्पताल विराटनगरमा मृत्यु भएको हो । यादवको मृत्युपछि आफन्तले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरीसँग गरेको अनुरोधलाई अस्वीकार गरिएको भन्दै शुक्रबार आक्रोशित समूहले अस्पताल परिसरमा चक्काजाम समेत गरेका छन् ।
मृतकका छोरा पीडित राजकुमार यादवका अनुसार गत असार १ गते मोरङ प्रहरीमा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत किटानी जाहेरी दिइएका कोहि पनि व्यक्तिहरु नियन्त्रणमा लिइएको छैन । पीडित परिवारले घटनामा संलग्नमध्येका शम्भु भनिने विजय यादव, किटानी भनिने दिनेश यादव, भोला यादव, रविनशंकर यादव, दिपेश यादव विरुद्ध किटानी जाहेरी दिइएका छन् । यसैगरी घटना गराउन उस्काउने
विराटनगर–१४ का बालदेव यादव, १८ का सन्जय साह र जहदा गाउँपालिका–१ का प्रदिपचन्द्र यादव विरुद्ध पनि प्रहरीमा जाहेरी दिइएको थियो । मोरङ प्रहरीले पहुँचवाला पीडकसँग पीडितलाई मिलाउने योजनासहित ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गतको मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन आनाकानी गर्दै आएको आरोप आफन्तको छ । प्रहरीले जाहेरीमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भन्दै मृतकका आफन्तले शुक्रबार कोशी अस्पताल परिसरमा प्रर्दशन गरे भने अस्पताल अगाडीको सडकमा लास चक्काजाम समेत गरेका थिए ।
प्रहरीले सबै खर्च बेहोर्न लगाउने भन्दै घटना भएको दिन उपस्थित रहेका तीनजना अध्यक्षहरुको नाम हटाएर अर्को जाहेरी लेख्न शुक्रबार पीडित परिवारलाई दवाव दिइएको आरोप पीडित परिवारको छ । घटना विराटनर–१४ का वडा अध्यक्ष बालदेव यादवको घरमा भएको थियो । यावदसहित अन्य दुईजना सन्जय साह र प्रदिपचन्द्र यादव पनि घटनामा संलग्नमध्येका प्रमुख पात्र रहेको मृतकका छोरा मुकेश यादवको आरोप छ ।
मोरङ प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले लास पोष्टमार्टमको प्रक्रियामा रहेको र किटानी जाहेरीमा उल्लेख भएका नामहरुको विषयमा अनुसन्धान भईरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रहरीले घटनामा संलग्नको खोजि गरिरहेको दावी गर्नुभयो ।
मृतक यादवलाई विराटनगर अस्पताल (विराट नर्सिङ होम) मा २२ दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो । त्यसपछि भारतको सिलगुडीमा चारदिनसम्म राखेर कोशी अस्पताल फर्काइएको थियो ।
यो बीचमा प्रहरीले घटनामा संलग्नसँग घाइतेको उपचारका लागि भन्दै तीनलाख रुपिँया उपलब्ध गराउन लगाएको थियो । घटना भए लगतै दिएको जाहेरीमाथि कारवाही नगर्नु प्रहरी र पीडकबीचको मिलेमतो जस्तो देखिएको पीडित परिवारको आरोप छ ।
पाँचथरमा हावाबाट बिजुली झलमल
पुष, 23, 2075
फिदिम / पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–२ सप्तम... ... ...
पाँचथरमा सोमबारदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुँदै
मंसिर, 2, 2075
फिदिम / पाँचथर, फिदिमकी १०१ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक... ... ...
ठूलो परिमाणमा हतियार र गोली सहित ५ पक्राउ
असार, 21, 2075
संखुवासभा / प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको अन�... ... ...
एक नेपालीमा कोरोना भाईरस संक्रमणको पुष्टि
गायिका आस्था राउतलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
११० जना सवार जेट विमान अफगानिस्तानमा दुर्घटनाग्रस्त
कोरोना भाइरस : नआत्तिन र उच्च सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव
अनलाईन सपिङ मार्फत ठगी गर्ने ४ जना पक्राउ
विकास खर्चमा सुस्तता ! नेपाल कसरी समृद्ध बन्न सक्ला ???
उड्यो बोइङको दुई इन्जिन भएको विश्वको सबभन्दा ठूलो जेट
भ्यालेन्सियासँग हारेपछि बार्सिलोना टिम ‘क्रुद्ध’ : मेस्सी बोलेनन्, प्रशिक्षकले के–के भने ?
साथीसंग खेल्दा खेल्दै खाटमा ठाेक्किएर बालककाे मृत्यु